မယုံရဘူးလား ၁၉၉ ရေ…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မယုံရဘူးလား ၁၉၉ ရေ….
Posted by Davit on Aug 1, 2012 in Copy/Paste | 16 comments
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ရင်ဖွင့်လာလို့ပါ။ ဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ ထုံးစံအတိုင်းသောင်းကျန်းချင်တိုင်းသောင်းကျန်းနေတဲ့ နှစ်လုံး သုံးလုံးအကြောင်းပါ။ သူတို့ရပ်ကွက်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့။ သူရင်ဖွင့်တာကတော့ ဒီလိုပါ…..
သူတို့ရပ်ကွက်ထဲမှာ နှစ်လုံး သုံးလုံး ရောင်းတဲ့သူတွေ၊ ဒိုင်ကိုင်တဲ့သူတွေရှိတယ်တဲ့။ အဲ့ဒိအဖွဲ့တွေကို တိုင်လည်းဘယ်မှာမှတိုင်လို့မရဘူးတဲ့။ ဆိုလိုတာက သူတို့က မြို့နယ်အပိုင်ရဲစခန်းနဲ့ တော်တော်လေးကိုပိုင်တယ်တဲ့။
ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်…မင်းတို့ဒါဆို ၁၉၉ ကိုတိုင်ပေါ့လို့ ပြောတော့…သူက “ဟ..ဘယ်နေပါ့မလဲ တိုင်တာမှကို ၃ ခါလောက်ရှိပြီ။ ဒါပေမဲ့ ၁၉၉ ကိုတိုက်ရိုက်တိုင်လည်း လာဖမ်းခါနီးကျတော့ မြို့နယ်ရဲစခန်းကသိသွားပြီး သူတို့ကို(ရောင်းတဲ့သူ) တစ်မနက်လောက် လာကြိုပြောထားတာတဲ့။ ဒါကြောင့်ဘယ်လိုမှတိုင်မရဘူးတဲ့။” ပြီးတော့ သူတို့ကပြောသေးတယ်… “တိုင်ချင်တဲ့နေရာကိုတိုင်…စောက်ဂရုကိုမစိုက်ဘူး” တဲ… ပြီးတော့ သူတို့ကြောင့် ဘဝပျက်သွားတဲ့သူတွေလည်းမနည်းဘူးပြောတယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်း ဘယ်သူ့ကိုမှအကြောင်းမကြားပဲတိုက်ရိုက်ဝင်ပြီးအရေးယူနိုင်မဲ့ နေရာကို ငါစုံစမ်းကြည့်ပေးမယ်ဆိုပြီး ခုပိုစ့်ကိုရေးဖြစ်တာပါခင်ဗျား…….
တိုက်ရိုက်တိုင်လို့ရမဲ့နေရာ(သို့) ဖုန်းနံပါတ်များကို သိတဲ့သူများရှိရင် ပြောပြပြီး ကူညီပေးကြပါလို့……
(သောင်းကျန်းနေတဲ့ နေရာနဲ့ လူနာမည်အပြည့်အစုံကို သိချင်ရင်လည်း ရေးပြပေးဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲတဲ့)
ဒိုင်တွေက ဆိုးတာကတော့ တော်တော်ဆိုးဆိုးဗျာ…..ကိုယ်နဲ့တော့ သိပ်မရင်းနှီးပေမဲ့ စကားပြောဖူးပါတယ်။ စကားပြော အရမ်းယဉ်ကျေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ လုပ်နေတာတော့ ပေါ်တင်နီးပါးပဲ….
စားလို့ ဝရင် လာဖမ်းပါလိမ့်မယ်..
သူ့ ဂွင်နဲ့ သူပဲ
ဂွင်ကျော်ပြီး ၀င်ဖမ်းလို့ ရဘူးပေါဒယ်..
မြို့ နယ် အဆင့်လောက်တော့ ပိုင်အောင် ပေါင်းထားနိုင်ပေမဲ့
မြို့ နယ်ထက်မြင့်တဲ့ အဆင့်က ဆင်းဖမ်းရင်တော့ ရားနိုင်လောက်ပါတယ်လေ.. ( အထင် )
ဟုတ်မယ်ထင်တယ်ဗျ ကိုဗိုက်ရဲ့…. ဒါပေသိ… ၁၉၉ ဆိုတာ မြို့နယ်ထက်မြင့်တဲ့အဆင့်လားလို့…. ကိုယ်လည်းဒါမျိုးကြတော့ သေခြာသိဘူးရယ်ဗျ….
တကယ်က နှစ်လုံးရောင်းတဲ့သူလဲမဟုတ်ဘူး သူ့ဝါသနာအရအိမ်မှာနှစ်လုံးတွက်တယ်
အကို ကိုရင်မောင်ရယ်…. အဲ့ဒါမျိုးကျတော့ ကိုယ်တွေ့ဗျ… ကိုယ်တွေ့ ….. သူတို့အလွန်ဆုံးဖမ်းရင် ကော်မရှင်စားနဲ့ ထိုးသားပဲ…. ဒိုင်ချုပ်မပြောနဲ့ ဂုတ်စီး ကိုယ်တောင် မဖမ်းဘူး…. နင့်နေအောင်သူတို့ရနေတာလေ….. အရင်တုန်းက ကျွန်တော့်အသိတစ်ယောက် (ဂုတ်စီး) အိမ်မှာဆိုရင် ရဲတွေဗျာ… မြင်လို့ကိုမကောင်းဘူး…ဟော တစ်ယောက် ဟောတစ်ယောက်ပဲ …. ဝင်ထွက်နေတာ ….. ဒါနဲ့သူငယ်ချင်းကိုမေးကြည့်တော့ သူကပြောတယ် … ဒါလေးတွေက ရဲပေါက်စလေးတွေတဲ့ သူတို့တစ်ယောက်လာရင် 200 မျိုး 500 မျိုးပေးရတာတဲ့….တစ်ရက်ကို အနည်းဆုံး 15 ယောက်လောက်တော့လာတယ်တဲ့….. ခုတော့(ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်လေက်ကစပြီး) ဒီကောင်လည်း ဂုတ်မစီးနိုင်တော့ဘူးဗျို့…ရှုံးလို့လေ…ဘွပါပျက်နေတယ်…
၁၉၉ က တကယ်တိုင်လို့ ရလားဟင်…
တစ်ခါသား လှည်းတန်းမှာ ညဘက်ကြီး လူတစ်ယောက် ဓားကိုင်ပြီးသောင်းကျန်းနေတာ အိမ်ပေါ်ကနေ လှမ်းကြည့်မိပြီး စိတ်တိုလို့ ၁၉၉ ကိုဖုန်းဆက်တာ ဆက်လို့မရဘူး။ ဟန်းဖုန်းနဲ့မို့လို့လားဆိုပြီး ၀၁ ခံခေါ်တာလည်း မရဘူး…
တော်သေးတာပေါ့..လူအုပ်က ၀ိုင်းလိုက်တာ မိသွားလို့..အဲဒီတော့မှ ကိုယ်တော်ချောရဲတွေ ရောက်လာတယ်….
မမွန်မွန်ရေ…. အဲ့လိုမျိုး အာတကေ နဲ့မပါတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးကတော့ တိုင်လို့ရတယ်ဗျ…ချက်ခြင်းလာဖမ်းတယ်….ကြုံဖူးတယ်…သင်္ကြန်မှာပေါ့…… ဟန်းဖုန်းကဆိုရင်လည်း 199 ခံစရာမလိုပါဘူး…..
တိုင်ချင်ရာ တိုင်ဆိုပါလား မိုက်တယ် ဟေ့.. ဘယ်လောက် ကြီးလဲမှ မသိတာ..
နှစ်လုံးသုံးလုံးဖမ်းတယ်ဆိုလည်း တကယ့်ဒိုင်ကြီးတွေကို မဟုတ်ပါဘူး …. ။
သူတို့ရဲ့ လက်ပွားတွေကိုသာဖမ်းတာပါ … ဒိုင်ကြီးတွေကလည်း ဘတ်ဂရောင်းကောင်းလို့ …. ဒိုင်လုပ်ရဲတာပါ …. ။ အဂတိလိုက်စားမှုတွေနဲ့ နှစ်လုံးသုံးလုံး တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်တယ် အသံကောင်းဟစ်ပြီး အခုထိ ၊ ထိထိရောက်ရောက် မကိုင်တွယ်နိုင်သေးတာပဲလက်တွေ့ပါ … ။
အာ … ဆောရီးပါ ….. ကိုဒေးဗစ်ကို …ကိုခင်ခလို့ မှားရေးမိပြန်ပြီး ဟီး ။
အထက်လူကြီးတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ဆွေမျိုးပတ်သက်မှု ရှိနေတာကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျ
“ တိုင်ချင်ရာတိုင်ေxာက်ဂရုမစိုက်ဘူး ” …ဆိုတာ တော်တော်ကြီးပါတယ် ဆိုတဲ့ ဒိုင်ကြီးတွေတောင် မပြောရဲဘူး ။
ကိုပေ ပြောတာ ဖြစ်နိုင်တယ် ..
(မယုံရင် သူ့မဟာနဖူးကြီး ကြည့်ပါ့လား ..
စဉ်းစားလွန်းလို့ ပြောင်နေဒါလေ .. )
အဲ့ဒီဒိုင်က ဆွေကြီးမျိုးကြီးနဲ့ နီးစပ်တဲ့ ဒိုင်ပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျ ..
ဒီပိုစ့်လေးဖတ်ပြီးတော့ အရမ်းကိုရီချင်ပါတယ်…ဘာလို့ လဲဆိုတော့ အရင်ကကျွှန်တော်က ဗိုလ်တထောင် ရဲစခန်းအနီးမှာနေတာပါ…ဘာတွေ့ လဲဆိုတော့ ရဲတွေရော သူတို့ ရဲ့ မိန်းမတွေရော ချဲထိုးကြလို့ ပါ…ချဲထိုးကွက် လက်ခံတဲ့နေရာကတော့ ရဲစခန်းအနောက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား……
ဖမ်းလည်းခဏဘဲ ထောင်ကျလည်းခဏဘဲ လွတ်လာတော့လည်း ဒီအလုပ်ဘဲပြန်လုပ်နေကျတာ ဘဲ အိမ်နားမှာလည်းတွေ့နေရတာပါဘဲ စနိုးတို့ရှေ့မှာတင်ဖမ်းသွားတယ် နှလုံးထီ ရောင်းတဲ့ ဦးလေးကြီးကို ဖမ်းသွားတယ် တတစ်ပတ်ဘဲကြာတယ် ပြန်လွတ်လာတယ် ခုတော့မတွေ့တော့ပြန်ဘူး ဘယ်နေရာရှောင်နေလည်းတော့မသိဘူး ။။